DHAGEYSO Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay garoon ay Al-shabaab horay u xireen. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay garoon ay Al-shabaab horay u xireen.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay ku guulaystay inu dib u furo garoon ay xireen AL-shabaab kaasoo ay horay ugu ciyaari jireen dhalinyarada ku nool degmada yaaqshid.
Guddoomiye kuxigeenka dhanka ammaanka iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed C/laahi Maxamed (Tuulax) ayaa xalay dib u furay garoonkaan oo ay Al Shabaab xireen Lix bilood kahor, kaasi oo ku yaalla degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
Talaabada uu qaaday maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka dambeysay kadib markii xalay gudoomiye ku xigeenka amaanka iyo siyaasada gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan ay kormeer ku tageen xaafado ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Gudoomiye Tuulax ayaa sheegay in Ururka Al Shabaab aysan ka talin magaalada Muqdisho, taasi bedelkeedana uu amar ku bixiyay inaan garoonkaasi markale dib loo xirin.
Guddoomiye kuxigeenka dhanka ammaanka iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in hadii markale garoonkan uu xirmo wax laga weydiin doono taliska booliska qeybta Bari iyo maamulka degmada Yaaqshiid.
Amarada ay Al Shabaab ku soo rogaan shacabka ayaa inta badan ka dhaqan gala Degmooyinka Gobolka Banaadir, maamulkuna wuxuu markasta sheegaa inuusan ogolaan doonin amar Al-shabaab in looga dhaqmo magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
← Weeraro diyaaradeed oo xalay ka dhacay gobolka Gedo.
DHAGEYSO Maamulka degmada Balcad oo ka hadlay dhibaatada dadka deegaankaas haysata. →